Action dị mma karịa fantasy-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Omume dị mma karịa echiche efu
Ndị mmadụ na-ekwukarị, ọfụma maliterela ọkara. Ya mere, gịnị na-eme ka mmalite dị mma? Echere m na naanị ịme ihe nwere ike ịbụ mmalite dị mma. Ime otu ihe, ọ bụrụhaala na omume ahụ, ọ bụ ọkara ihe ịga nke ọma. Enwere ike ịhụ na ikike ime ihe buru ibu.
Nku nnunu buru ibu, O buru na o naghi agbali ife ya nku, olee otu o g’esi efe elu? N’agbanyeghị otú ikike mmadụ nwere siruru n’ike, ọ bụrụ na ọ naghị arụsi ọrụ ike, olee otú ọ ga-esi nwee ihe ịga nke ọma? Ọbụna ma ọ bụrụ na ngwaahịa mba bara ọgaranya, ọ bụrụ na mba ahụ anaghị agba mbọ maka mmepe, olee otu a ga-esi guzoro ogologo n'etiti mba ụwa. Ihe a niile na-egosi na ime ihe dị mma karịa echiche efu.
“Omume” abughi okwu efu efu. Ọ dị gị mkpa iji okwukwe siri ike, mmụọ ịlụ ọgụ na ntụkwasị obi iji nweta.
N'ime oge ahụ, ndị a ma ama kwụrụ ụgwọ maka mgbalị ọ bụla gara nke ọma. Dị ka Beethoven, ọ bụ onye ntị chiri, kpuru ìsì na ọnọdụ ahụike karịa mmadụ nkịtị ọ bụla. Ma ọ dara mbà n'obi? Emela, Beethoven arịgoro mgbe niile maka nsogbu ahụ, chere ihu ndọghachi azụ, ọchị ọchị na nchekwube na ndụ. N’ikpeazụ, ọ ghọrọ onye egwu ama ama n’ụwa niile n’omume nke ya.
N'oge a, ọtụtụ ndị nwere nnukwu nrọ n'ime obi ha. Agbanyeghị, ha anaghị enwe nkwenye siri ike, mmụọ ịlụ ọgụ na nkwenye iji merie, yabụ ebumnuche ha na-anọ n'ọnụ, onye a "na-ekwu okwu ibu" ọ ga-enwekwa ọganiihu? Ndị a na-abụkarị “ụbọchị azụ, ụbọchị abụọ, ụgbụ ka ha kọọ.” Ọ bụrụ na ị naghị eme ihe ọ bụla, olee otu ị ga-esi nweta echiche dị elu?
Ezigbo ndị enyi, anyị kwesịrị icheta eziokwu mgbe niile: omume dị mma karịa echiche efu. Ihe ịga nke ọma na-amalite site n'omume.
Previous: SUNSOUL nwere ike inye gi ihe ichoro
Ọzọ: Enwe owu ọmụma